आजबाट एसइइ÷४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदै
गैडाकोट, १० चैत्र । आजदेखि देशैभर एसइई परीक्षा सुरु हुँदैछ । विहान ८ बजेबाट सुरु हुने परीक्षामा देशैभरबाट ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । यता नवलपुरका ७७ जना विद्यार्थी भने एसइइ परीक्षा दिनबाट बन्चित भएका छन् ।
सवैभन्दा धेरै रत्नराज्य मा.वि.र बेल भन्ज्याङ्ग मा.वि. बाट ६÷६ जना,डेडगाँउ मा.वि. र जनता मा.वि. इटौराबाट ५÷५ जना सहभागी हुन नपाउने इकाई प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसवर्ष नवलपुरबाट ६ हजार ६ सय ७० विद्यार्थी सहभागी हुेनमा नियमित तर्फ ६ हजार ६ सय २७ जना र एक्जाम्टेडतर्फका ४३ जना गरी ६ हजार ६ सय ७० जना छन् ।
जसमा ८४ वटा सामुदायिक विद्यालय र निजी तथा संस्थागत ४९ सहित १ सय ३३ जटा विद्यालयका विद्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । यता, यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी चितवनमा पूरा भएको छ । चितवनबाट कूल ११ हजार २५४ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन् । यस वर्षदेखि पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरुपअनुसार भोलिबाट सुरु भई आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् ।
परीक्षार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयतर्फ दुई हजार ५५७ छात्र र तीन हजार १४८ छात्रा रहेका रहेका छन् त्यसैगरी संस्थागत विद्यालयतर्फ पाँच हजार ५०२ छात्र र पाँच हजार ५०५ छात्रा रहेका छन् । यस्तै यस वर्षको परीक्षामा नायिका करिष्मा मानन्धर र नेकपाकी नेता एवम सभासद शान्ता चौधरीपनि सहभागी हुँदैछन् ।